ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ » ဒါဟာညာဘက်တစ်ဦးကအိမ်ထောင်သည်နှင့်မေတ္တာမျှ Fall ရန်ဖြစ်သည်?
ဒါဟာညာဘက်တစ်ဦးကအိမ်ထောင်သည်နှင့်မေတ္တာမျှ Fall ရန်ဖြစ်သည်?
သတိမထားမိပဲအိမ်ထောင်သက်လူတို့နှင့်အတူချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌လဲသောသူအမျိုးသမီးများစွာရှိပါတယ်, အခြားသူများစွာရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိကိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာအဘို့အအိမ်ထောင်သည်အမျိုးသားတွေထွက်ရှာကြစဉ် (Pun ရည်ရွယ်ပါသည်) နည်းပညာပိုင်းကို un-ရရှိနိုင်သောသူသည်ယောက်ျားနှင့်ဖြစ်ခြင်း၏. သို့သော်, မေးခွန်းကိုအမြဲတမ်းအိမ်ထောင်သည်ယောက်ျားနှင့်အတူမေတ္တာ၌ကျမှန်သည်မမှန်သည်ကိုနေဆဲ?
အိမ်ထောင်သည်ယောက်ျားသည် Falling ညာဘက်ပုံရပေမည်, ထိုလူကိုသူတို့အဖြစ်ကိုကောင်းစွာအတူတူခံစားပြောပါတယ်အထူးသဖြင့်ဆိုရင်. ဖြည့်စွက်ကာ, ထိုကဲ့သို့သောအခြေအနေမျိုးတွင်မိန်းမသည်လည်းထိုလူကိုမကြာမီမယားကနေမခွဲထွက်လိမ့်မည်ဟုမှားသောလုံခြုံရေးသဘောမျိုးရရှိနိုင်ပါသည်, သူတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုမခြားမလပ်စိမ်းလန်းနိုင်အောင်. မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ, တစ်ဦး fallacy, သောအောက်ပါအကြောင်းရင်းများကြောင့်လုံးဝပြိုပျက်ရရန်လိုအပ်သည်.
တစ်မိသားစုနှင့်အတူလူတဦးသည်အမျိုးသမီးတစ်ဦးကအမှန်တကယ်ဆက်ဆံရေးအတွက်ဖြစ်ခြင်း၏စိတ်ကျေနပ်မှုကိုပူဇော်ခြင်းငှါတတ်နိုင်ဖြစ်လိမ့်မည်. ထိုလူကိုစောင့်ရှောက်မှုနှင့်အတူသူမ၏ဂရုစိုက်ရန်သူ့ရဲ့အချိန်ကိုယူလျှင်တောင်မှ, ချစ်ခြင်းမေတ္တာ, နှင့်လက်ဆောင်များ, သမ္မာတရား, ဒါကြောင့်အရာတစုံတခုကိုပြောင်းလဲလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ!
ထိုကဲ့သို့သောအမျိုးသမီးတစ်ဦးသည်အစယောက်ျားရဲ့မယား၏ရှူးဖိနပ်ထဲမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုတင်နိုင်ဖို့ကြိုးစားသင့်ပါတယ်. အခြားသောမိန်းမသူတို့ကိုတူညီတဲ့ပြုလျှင်သူတို့ဘယ်လိုခံစားရမယ်ဆိုတာ? သူတို့ကယ့်ကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုလေးစားလျှင်, ထို့နောက်ထိုသူတို့သည်မိမိတို့အကျင့်ကိုကျင့်တက်အဆုံးသတ်လိမ့်မည်တစ်ခုတည်းသောအရာကတော့မိသားစုကိုတက်မချိုးဖြစ်ကြောင်းကိုနားလည်ထားသင့်ပါတယ်, နှင့်မဆိုသောမိန်းမရှိသည်စေလိုသည် Label တစ်ခုမက, ကျွန်တော် ... မျှော်လင့်ပါတယ်!
လူတို့သည်မိမိအသစ်ကိုတွေ့ရှိရမေတ္တာနှင့်တကယ့်ဆက်ဆံရေးရှိနိုင်အောင်သူတို့သည်မကြာမ၎င်းတို့၏ဇနီးများကနေမခွဲထွက်လိမ့်မည်ဟုထပ်ခါထပ်ခါမနာသီချင်းဆိုမည်ရင်တောင်, ကဖြစ်ပျက်သွားဘယ်တော့မှမယ်. လူတို့ကသူတို့နှင့်အတူတစ်ဦးဆက်ဆံရေးရှိရန်သဘောတူသောမိန်းမတို့ကိုရှာတွေ့ပါ, သူတို့မိသားစုတွေရှိသည်ကို သိ., ထို့နောက်လူတို့ကတစ်ဦးကိုနှစ်သိမ့ဇုန်သို့ get. ဒါဆိုရင်, သူတို့ကျိန်းသေတဲ့ status-ပိုနေမြဲကျားနေမြဲအခြေအနေကိုထိန်းသိမ်းလိုပါလိမ့်မယ်, သူတို့မိသားစုမှထွက်ခွာရန်ဆန္ဒရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပါကတည်းက.
အမျိုးသမီးများ, တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်ခြင်းမရှိကြ! ကအိမ်ထောင်သက်လူနှင့်အတူဆက်ဆံရေးရှိသည်ဆုံးဖြတ်ခြင်းမပြုမီ, ပျက်စီးယိုယွင်းခြင်းကိုခံရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်သောမိသားစုကိုသတိရ. ပါဝင်ပတ်သက်သားသမီးရှိလျှင်ယင်းအခြေအနေကိုပိုမိုဆိုးရွားပါလိမ့်မယ်. ထိုလူကသူတို့ကိုထားခဲ့ဖို့ဆုံးဖြတ်လျှင်သားသမီးကျိန်းသေအဆိုးရွားဆုံးဘေးဒဏ်သင့်သူဖြစ်လိမ့်မည်. ထိုအရဲ့ဇနီးမေ့လျော့မခံပါစေ, အသက်အဘို့အ scarred စေခြင်းငှါအဘယ်သူသည်.
အဘယ်ကြောင့်မြေကြီးပေါ်တွင်, အဆင်းလှသောအလိုတခုတည်း, အသိဉာဏ်ရှိသော, smart အမျိုးသမီးတစ်ဦးကအမှန်တကယ်ဆက်ဆံရေးအတွက်ကျူးလွန်ခြင်းကိုမနိုင်သူတစ်ဦးသည်လူအဘို့အနည်ထိုင်ချင်တယ်, ထိုလူကိုလက်ထပ်မိလို့? ထိုကဲ့သို့သောအမျိုးသမီးတစ်ဦးသည်အမှန်တကယ်ဆက်ဆံရေးရှိခြင်းမှအပြည့်အဝဆက်ကပ်အပ်နှံထားရလိမ့်မည်သူတစ်ဦးတစ်ဦးတည်းလူကိုရှာနေပိုကောင်းဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်? အမျိုးသမီးများတက် style နဲ့ကိုယ့်ကိုယ်နှင့်တစ်ဦးတစ်ဦးတည်းလူကိုဆွဲဆောင်ဖို့၎င်းတို့၏စွမ်းရည်ကိုယုံကြည်ဖို့လိုပါတယ်, အဘယ်သူကိုနှင့်အတူပူးတွဲမရှိကြိုးနဲ့ဆက်ဆံရေးမျှဝေနိုင်ပါသည်.
ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုထိန်းချုပ်ရန်အခက်ခဲဆုံးစိတ်ခံစားမှုတစ်ခုဖြစ်တယ်. အမျိုးသမီးတစ်ဦးသည်အမှန်တကယ်နှင့်နက်ရ​​ှိုင်းစွာအိမ်ထောင်သည်ယောက်ျားသည်သာချစ်စေခြင်းငှါ, သလောက်, အဖြစ်မှန်ဆက်ဆံရေးဘယ်နေရာမှာမဆိုဦးတည်သွားမပင်ဖြစ်သည်. ဒီအတွက်ကြောင့်, တစ်နေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန်ကရပ်တန့်ရန်ကောင်းတယ်, အစားထက်နောက်ပိုင်းတွင်, အနာရောဂါကိုငြိမ်းစေရန်လုံလောက်သောအချိန်ရရန်သကဲ့သို့. မှာအားလုံးလွယ်ကူလိမ့်မည်မဟုတ်ပေကြောင်းသေချာပါစေ, ဒါပေမယ့်အဆုံး၌တန်ဖိုးရှိလိမ့်မည်.
အိမ်ထောင်သည်ယောက်ျားနှင့်ဆက်ဆံရေးတွင်အမျိုးသမီးတစ်ဦးသည်အားလုံးထောင့်ကနေကိုအခြားသူများအားဖြင့်တရားစီရင်ခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်. ထိုမိန်းမသည်, ထိုသို့, ထိုသို့ပြုရသောအခွင့်ကိုအရာဖြစ်၏ကြောင့်ခိုင်မာခြင်းနှင့်လူနှင့်အတူပယ်ဖြတ်ရန်လိုအပ်သည်. ဖြည့်စွက်ကာ, အမျိုးသမီး၏အကျိုးကျေးဇူးကိုချွတ်ချိုးဖျက်ဖို့အဘို့အက, ဆက်ဆံရေးရှိခြင်းမှအပြည့်အဝကိုကျူးလွန်ဖြစ်နိုင်သူတစ်ဦးသည်လူကိုခရီးဦးကြိုနိုင်မည်.
အမျိုးသမီးတစ်ဦးကိုတစ်ဦးသည်အိမ်ထောင်သည်လူနှင့်အတူတက်ပြယ်ပြီးတာနဲ့, ထို့နောက်ထိုလူနဲ့အဆက်အသွယ်ပုံစံအားလုံးကိုရပ်တန့်ရန်အလွန်အရေးကြီးသည်. ထိုမိန်းမသည်ပင်ထိုလူကိုထိတွေ့ရရန်အသုံးပြုခဲ့သောဖုန်းနံပါတ်ကိုပြောင်းသင့်. ဤသည်အနာရောဂါငြိမ်းစရာလုပ်ငန်းစဉ်၏အစဖြစ်လိမ့်မည်.
အဘယ်သူမျှမသူသို့မဟုတ်သူမနှင့်အတူမေတ္တာ၌လဲသောသူထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်, သို့သော်, ကအိမ်ထောင်သည်ယောက်ျားနှင့်အတူမေတ္တာ၌ကျတရားဘက်၌မဖြစ်ကြောင်းကိုသတိရဖို့အရေးကြီးတယ်က. ကမှတ်စုပေးတွင်, အိမ်ထောင်သည်အမျိုးသားတွေနဲ့မေတ္တာထားပြီးနေသောသူတို့အား၎င်းမိန်းမတို့အဘို့, တစ်ချိုးတက်၎င်း၏အချိန်!